ट्राफिकले गाडीमा किन मार्छन् भोटे ताल्चा ? « News24 : Premium News Channel
ट्राफिकले गाडीमा किन मार्छन् भोटे ताल्चा ?
यदि तपाइंले कहिँ कतै सडक छेउमा मोटर साइकल फ्याट्ट छोडेर कतै अफिस वा पसल तिर छिर्नु भयो भने तपाइंलाई थाहा छ कि ट्राफिक प्रहरीले तपाइंको मोटर साइकल कि त घिसारेर नजिकको प्रहरी चौकीको पार्किङ्गमा लिएर जान्छ कित तपाइँ नआए सम्म चिट थम्याउन कुरेर बसिरहन्छ ।
यदि तपाइंले आफ्नो गाडी सडक छेउमा पार्क गरेर कतै लाग्नु भो भने के होला ? न घिसारेर लान सक्छ नत तपाइंको गाडी ट्राफिकले ढुकेरनै बस्न सक्छन् ! यदि तपाईं हतारमा हुनुहुन्छ र गाडी सडक छेउमा पार्क गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने अब होसियार !
सुन्दा तपाइंलाई पत्यार पनि नलाग्न सक्छ तर आज भोलि ट्राफिक प्रहरीले यदि कुनै गाडी सडक छेउमा पार्क गरेको अबस्थामा भेट्टायो भने गाडीमै भोटे ताल्चा मारिदिन्छन् र ट्राफिक आफ्नो बाटो लाग्छन । जब तपाईंलाइ थाहा हुन्छकी गाडीलाइ ट्राफिकले कब्जा गर्यो त्यसपछि तपाईं आफैं ट्राफिकको नजिकको बिटमा गएर खबर गर्नुपर्छ । ट्राफिकले तपाइंलाई चिट थम्याउछ र भोटे ताल्चा खोलिदिन्छ ।\_